> Resource > Windows > Windows ma bilaaban doona, oo aan xitaa in Safe Mode
Marka Windows aan bilaabi doonaa, oo aan xitaa in Safe Mode
Waxa ay noqon doontaa maalin weyn u Sugnaaday marka aad riixdid batoonka bilowga on your computer oo aad ka tarjumaysaa waxba, xitaa ma waxa ay u helaan in Safe Mode. Waxaa jira sababo badan oo aad Windows aan kabaha doonaa, laakiin xoogaa si aan kuugu sheegno wixii dhibaato uu noqon karo. Waxaad kaliya oo aan kabaha kartaa Windows oo ma fariimaha ka hesho, si aad kaliya dhihi karaa "Wax ka shaqeeya" si ay u sharxaan aad arrinta.
Waa arrin wax ka xun, laakiin aan ugu xumaa. Ilaa iyo inta aad computer waa awood, waxaad hagaajin karo arrimaha software kasta oo ku yaal. Haddii ay jiraan wax muhiim ah, waxa aad dib ugu karaa nidaamka, kaas oo noqon kara hab degdeg ah si uu u xaliyo dhibaatada kasta software. Waxa kale oo aad aan u baahnayn in la niyad-marka ay jiraan xog muhiim ah oo ku kaydsan, ama aadan haysan disk Windows ah. Samaynta CD ah Downlaods ama USB drive aad Windows ma aha sida adag tahay sida aad u malaynayso. Just Raac tallaabooyinka hoose si ay u xaliyaan dhibaatada aad si fudud.
3 tallaabo si ay u helaan Windows aad in aan kabaha doonaa
First of dhan, heli badbaadinta CD / USB halkan: Wondershare LiveBoot Boot CD / USB , barnaamij weyn oo kaa caawin kara inaad si ay u helaan Windows, ka heli iyo hagaajin dhibaatooyin Windows aad la qasabno yar.
Marka uu iibsigu hal software tan, waxaad heli doontaa link download ah iyo ruqsad ka Wondershare. Download oo ku xidh kombiyuutarka ah ka shaqeeya, ka dibna raac talaabooyinka hoos ku.
Orod LiveBoot Wondershare kombiyuutarka ka dib markii ay ku rakibidda, iyo daaqad hoos ku qoran la soo bandhigi doonaa. Waxaad dooran kartaa in la abuuro CD ah Downlaods ama USB drive ah Downlaods adigoo raacaya tilmaan-soo bandhigay. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa galinta CD ah oo bannaan ama USB drive galay computer iyo riix badhanka gubatay. Oo markaas waxaad qaadataa ka mid ah disk iyo dhaqaaqo tallaabada xigta.
Step2. Bilow Windows la CD Downlaods / USB
Hadda noqon si aad u computer oo Windows aan kabaha doonaa. Geli CD la gubo ama USB in kombiyuutarka, iyo dib u bilaabeyso. Marka nidaamka uu bilaabo inuu ku shuban, jaraa'id button F12, oo ah Device Menu Boot muuqan doonaa. Dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive", oo aad noqon doonaa hore ee suuqa kala ah sidan. Dooro ikhtiyaarka koowaad: Boot ka LiveBoot. Hadda aad helitaanka your computer.
Step3. U dayactir aad "Windows aan bilaabi doonaa" Arinta
Marka Wondershare LiveBoot 2012 u muuqataa, tag "Windows Recovery" doorasho, iyo dooran "Loading Shil Xalka" dhinaca bidix ee suuqa. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa syptom in aad encoutered marka bilaabay your computer. Sida laga soo xigtay waa in, ay jiraan sababo in aad Windows boot failure iyo xal u sababo kala duwan. Waxaad isku dayi kartaa hal xal oo ay ka mid heynayo aad hagaajin kartaa arrin Windows si guul leh.